Kala-iibsiga ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah ee leh Shaff Trend Cycle Tusiyaha | vfxAlert official blog
Ganacsi suuqeed leh tilmaamaha «Shaff Trend Cycle»
Suuqa Forex, sida wax kasta oo kale oo adduunka ah, wuxuu u wareegayaa si wareeg ah. Sare u kac ayaa had iyo jeer la socda hoos u dhac; isu dheelitirka awoodda ayaa si isdaba joog ah uga beddeleysa kuwa wax iibsanaya oo u iibinaya. Calaamadaha ganacsiga ee binariinka ah iyadoo la raacayo isbeddelka hadda socda ayaa ganacsadaha siinaya faa'iido wanaagsan oo deggan. Si sax ah u go'aaminta jihada ama isbeddelka isbeddelka hadda socda ayaa kaa caawin doonta tilmaamaha «Shaff Trend Cycle» .
Hantida ganacsiga: Ikhtiyaar kasta oo ganacsi calaamadaha . Shuruudda ugu weyn waa go'an (2-3 dhibic) faafitaan iyo lacag la'aan qarsoon.
Baqshadaha: Muddada (14), Leexashada (0,1), Celceliska Dhaqdhaqaaqa (SMA) . Kala duwanaansho dhismaha khadadka qiimaha firfircoon ee loogu talagalay ka ganacsiga kanaalka isbeddellada ee dib u noqoshada ama burburka xuduudaha. Iyada oo ku saleysan celceliska dhaqdhaqaaqa. Fikradda ugu weyni waa ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah oo ku saabsan kanaalka qiimaha firfircoon ee saddexda celcelis ahaan, taas oo qiimaha uu ku socdo inta badan waqtiga suuqa.
Hoos u dhaca celceliska muddada ayaa baqshadaha ka dhigaya kuwo "firfircoon", koror - hoos u dhiga firfircoonidooda. Waqtiga shaqada ee la xulay oo yar, ka sii yareya cabirku waa inuu ahaadaa inuu lahaado boqolkiiba inta baararka looga baahan yahay gudaha kanaalka.
Halbeegga jaangooyada ayaa muujineysa inta xuduudaha kanaal laga qorsheynayo celceliska qiimaha. Waxaa lagugula talinayaa inaad doorato leexasho kudhaca 0.1-2; haddii kale, kanaalka ayaa noqda mid aad u "ballaadhan" oo ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah ee ikhtiyaariga u ah ganacsiga ee qiimaynta isbeddelka.
Shaff Trend Cycle: Dherer Degdeg / Gaabis / Wareeg (12/26/9) . Wareegtada wareegga suuqa. Marka hore, qiimaha oscillator-ka MACD ayaa la xisaabiyaa, ka dibna labanlaab labalaab ah ayaa la sameeyaa iyadoo la adeegsanayo habka loo yaqaan 'Stochastic'. Waxaan helnaa ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah oo bilaash ah oo isbeddel isbeddel leh oo leh ugu yaraan daahitaan. Waxaa loo isticmaali karaa inay tahay tilmaame xad dhaaf ah (heerka 75) iyo xad dhaaf (heer 25). Natiijooyin wanaagsan oo ku saabsan isbeddellada dhinac ee 50-60 dhibcood.
Fursadaha calaamadaha ganacsiga :
WAC - ikhtiyaar . Qiimuhu wuxuu ka sareeyaa khadka dhexe ama xuduuda baqshadaha. Oscillator-ku wuxuu kor u kacayaa ama aagga lagu iibsaday ee ka sarreeya heerka 75.
PUT - ikhtiyaar Xaaladaha iska soo horjeeda: Qiimuhu wuxuu ka hooseeyaa khadka dhexe ama xadka baqshadaha. Oscillator-ka ayaa hoos u sii dhacaya ama aagga lagu iibsaday ee ka hooseeya 25.
Ku xoqidda istiraatiijiyada suuqa cryptocurrency waxay u baahan tahay tijaabo hordhac ah. Halkan, wareegyada suuqa ee is-weydaarsiga way ku kala duwanaan karaan muddada. U beddel waqti cayiman oo 30 daqiiqo ah, halkaas oo calaamadaha binary ee crypto ay ka sii kalsooni badan yihiin.
Waxaa lagugula talinayaa inaadan ka ganacsan inta lagu jiro xilliyada isbeddelku hooseeyo. Marka dhaqdhaqaaqa sicirka si deg deg ah ku dhammaado, saxitaanka iyo khasaaraha calaamadaha binary otomaatiga ayaa bilaabmaya. Waxaan had iyo jeer u furnaa dhanka jihada ugu weyn!
Kama ganacsaneyno wax soo saarka wararka aasaasiga ah iyo tirakoobka. Falanqaynta farsamada ayaa joojineysa shaqeynta, ikhtiyaaraadka ikhtiyaariga ah nuqul calaamadaha ganacsiga waa been.
Schaff Trend Cycle waa oscillator weyn oo mudan in la baadho oo lagu daro tilmaamayaasha waxtarka u leh faylalkaaga. Waxa kaliya ee la xasuusto waa in STC, sida qalab kale oo falanqeyn farsamo ah, uusan bixin karin 100% guuleysata calaamadaha binary markasta. Had iyo jeer raadso xaqiijin dheeraad ah!